Cameron: Waa qalad duqeynta Russia - BBC News Somali
Cameron: Waa qalad duqeynta Russia
Turkiga iyo Britain, ayaa cambaareeyay faragelinta Russia ay ku taageereyso madaxweyne Asadka Syria.
Madaxweynaha Turiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa ugu yeeray qalad murugo leh oo sii go'doominaya Moscow, halka ra'iisul wasaaraha Britain, David Cameron, uu ku tilmaamay qalad xun faragelinta Russia ay ku taageereyso madaxweyne Asad.
Russia, ayaa sheegtay in ay beegsaneyso kooxda dowladda Islaamka, kuwaasi oo reer galbeedkuba duqeynayaan. Balse Cameroon, ayaa sheegay in badi duqeymaha cirka Russia ay u muuqdaan, in ay ku dhacayaan meelaha ay haystaan kooxaha kale ee falaagada.
Wuxuu sheegay in tallaabooyinka Moscow ay horseedayaan xagjirinmo dheeri ah iyo argagixiso.